Mt.Popa -Extinct Volcano - Hotel Linn in Mount Popa Myanmar
Reservation: + 95-9 789 364 015
Chaung Twin Oo
Trekking to Mt.Popa
Hotel Linn & Restaurant – Popa
Good restaurant in Popa and beautiful place to relax.
“Welcome to Hotel Linn & Restaurant ( Popa ) ,Come and relax; Here is the place giving you peaceful mind by seeing the scenario of natural beauty.” Being located inapeaceful and quiet place , you can experienceapleasant view of Popa Mountain Range, attractive Sunset View and city away feeling.
No-132, 2nd Floor, KhaingShweWar Rd (Baho Rd), Kamayut Township, Yangon, Myanmar
+ 95-9 45440 50 30
Near By Pan Say Kan, Byatta Pan Sat Road , Popa, Myanmar
+ 95-9-789 364 015
Mt.Popa -Extinct Volcano
ပုပ္ပားသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် သာမက ပြည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းများအကြား၌ပါ ထင်ရှားသည့် ခရီးသွားဒေသတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပုပ္ပားသည် အပန်းဖြေခရီးသွားများအပြင် ဘူမိဗေဒ၊ သမိုင်း၊ ရုက္ခဗေဒ၊ သစ်တော အစရှိသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာသုတေသီများ လာရောက်သုတေသနပြုကြသည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ လေ့လာဖွယ်ရာများ များပြားသည့် နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ မျောက်၊ ငှက်၊ လိပ်ပြာစသည့် ဇီဝမျိုးစိတ်များကို သုတေသနပြုကြသူများ၊ ပရ ဆေးပင်များနှင့် သစ်ခွအပါအဝင် အပင်မျိုးစိတ်များကို လေ့လာသုတေသနပြု သူများသည် ပုပ္ပားသို့ လာရောက်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့အတူ ပုပ္ပားသည် မြန်မာလူမျိုး များ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသောနတ်များ ပျော်စံရာနေရာတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ထွက်ရပ်ပေါက်စသည့် လောကီလွန်လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒေသတစ်ခု အဖြစ်လည်းကောင်း မြန်မာလူမျိုးများအကြား ထင်ရှားကာ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်ကြသူ ခရီးသွားဧည့်သည်များဖြင့် အမြဲစည်ကားနေလေ့ရှိသည်။
ပုပ္ပားတောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ပန်း တောင်းမြို့မှ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁ဝ မိုင်အကွာ၊ ပဲခူးရိုးမ၏ မြောက်ဘက်အစွန်တွင် တည်ရှိသည်။ ပုပ္ပားသည် ရန်ကုန်မြို့မှ ၄ဝ၅ မိုင်၊ ပုဂံမှ အရှေ့တောင်ဘက်သို့ ၃၁ မိုင်ကွာဝေးကာ မြေပုံညွှန်းအရ ပုပ္ပားတောင်၏ တည်နေရာသည် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂ဝ ဒီဂရီ ၅၂ မိနစ်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၁၄ မိနစ်ဖြစ်သည်။ ပုပ္ပားတောင် သည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊ ပုဂံအနီးရှိ မီးတောင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ကာ ပုပ္ပား တောင်ကို ရာသီဥတုသာယာချိန်တွင် ၃၇ မိုင်ကွာဝေးသော ဧရာဝတီမြစ်အနီးမှ မြင်တွေ့နိုင်သည်။
ပုပ္ပားမြို့သည် ပုပ္ပားတောင်ကလပ်သွားရာလမ်းတွင် တည်ရှိပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှု ကောင်းမွန်သော မြို့ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုပ္ပားတောင်တွင် တောင်မကြီးနှင့် တောင် ကလပ်ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းရှိရာ တောင်ကလပ်သည် အနောက်ဘက်သို့ ဆင်ခြေလျှော နိမ့်ဆင်းသွားပြီး ပုပ္ပားတောင်ကလပ်ကို ပုပ္ပားမီးတောင်ပေါက်ကွဲပြီး ပဲ့ထွက်သွားသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟု ယူဆမှုများရှိသကဲ့သို့ မီးတောင်လည်တိုင်ဟု ယူဆမှု များလည်းရှိသည်။ ပုပ္ပားတောင်မကြီးသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၄၉၈၁ ပေမြင့်ပြီး မှတ်မိလွယ်ရန် တစ်ဆယ့်ကိုးယုတ်ငါးထောင်ဟု မှတ်သားကြသည်။ ပုပ္ပား တောင်ကလပ်သည် ၂၄၁၇ ပေမြင့်မား၍ မတ်စောက်ပြီး ကလပ်ပုံစံရှိသဖြင့် တောင် ကလပ်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားများသည် တောင်ကလပ်သို့ အများဆုံး လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။
နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နှင့် ၂၅ ရက်အကြားတွင် ပုပ္ပားတောင်မတွင် တောင်တက်ပွဲများရှိပြီး အခမ်းအနားကြီးတစ်ရပ်မဟုတ်သော်လည်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ခရီးသွားများသည် ထိုရက်များတွင် ပုပ္ပားသို့လာရောက်ကာ တောင်မကြီးထိပ်သို့ ပျော်ရွှင်စွာတက်ရောက်လေ့
ရှိကြသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက် ခရစ္စမတ်နေ့တွင် တောင်တက်သူများ အစည်ကားဆုံးဖြစ်ပြီး ပုပ္ပားအနီးဝန်းကျင် ဒေသများဖြစ်သည့် ကျောက်ပန်းတောင်း၊ မြင်းခြံ၊ ညောင်ဦးအစရှိသည့် မြို့နယ် များမှ အများဆုံးလာရောက်ကြသည်။ တောင်တက်သူများသည် ပုပ္ပားအပန်း ဖြေစခန်း(ဏသစျွေနျသမအ)မရောက်မီ ဝဲဘက်ရှိ တောလမ်းမှ ပုပ္ပား တောင်ပေါ်သို့ တက်ရောက်လေ့ရှိကြသည်။ တောင်တက်ရန် လာရောက်ကြသူများသည် တောင် တက်သမားများ မဟုတ်ကြသော်လည်း ပျော်ရွှင်စွာ စုပေါင်းတက်ရောက်ကြသည့် ခရီးသွားများဖြစ်ကြပြီး ပြည်ပခရီးသည်များလည်း ပါဝင်တက်ရောက်ကြသည်။ ပုပ္ပားဒေသ၏ ဒီဇင်ဘာလတွင် အေးစိမ့်သောရာသီဥတုကို ခံစားကာ တောင်တက် ကြသည့်ခရီးသည် မမေ့နိုင်ဖွယ် အမှတ်တရဖြစ်ကြရသဖြင့် ပုပ္ပားသို့ လာရောက် တောင်တက်ကြသူများသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်လျက်ရှိပေသည်။
ပုပ္ပားတောင်၏ ကန်တော့ပုံမီးတောင်ဝသည် မြောက်ဘက်တွင် အနောက်သို့ အနည်းငယ်နိမ့်နေသောကြောင့် ပုပ္ပားတောင်သည် အရှေ့ဘက်၊ အနောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တို့တွင် မြင့်နေသည်ဟုထင်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ပုပ္ပားတောင်ကို အနောက်ဘက်မှကြည့်လျှင် တောင်ထွတ်နှစ်ခုမြင်ရ၍ မြောက်ဘက်မှကြည့်လျှင် တောင်ထွတ်တစ်ခုသာမြင်ရသည်။ ပုပ္ပားတောင်သည် စပါးပုံတောင်၊ ရေတွင်း တောင်၊ မောင်းတောင်၊ ငုတ်တိုတောင်၊ နွားလပို့တောင်၊ မှန်တောင်၊ ဆေးပွင့်တောင်၊ စိန်တောင်၊ မာလာတောင်၊ ကင်ပွန်းတောင်စသည့် တောင်စွယ်များနှင့် ဆက်နေ သည်။ ပညာရှင်များက ပုပ္ပားမီးတောင်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅ဝဝဝဝ ဝန်းကျင်က ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ယခုအချိန်တွင် ပုပ္ပားသည် မီးတောင်သေတစ်ခုဖြစ်နေပြီး မီးတောင်သေထိပ်ဝသည် တစ်မိုင်ခန့်ကျယ်ဝန်းကာ ပေ ၂၆၅ဝ နက်ရှိုင်းသည့် ချောက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေသည်။ ယင်းချောက် ကြီးကို ချုံမတွင်းချောက်ဟု ခေါ်ကြသည်။
ပုပ္ပားတောင်မကြီးသည် တောမနက်လှသော် လည်း မျောက်၊ တောဝက်၊ ချေနှင့် စိုင်များ ကျက်စားနေထိုင်ကြကြောင်း ဦးသိန်းဝင်း က ရှင်းပြသည်။ ပုပ္ပားတောင်မတွင်မျောက်ညိုနှင့် မျောက်မျက်ကွင်းဖြူများ နေထိုင် ကျက်စားလျက်ရှိကာ ယင်းတို့သည် မျိုးစိတ်ကွဲပြားသော်လည်း မျောက်ညိုများက ရွက်ကြမ်းများကိုစား၍ မျောက်မျက်ကွင်းဖြူများက ရွက်နုများကိုစားကြသဖြင့် အတူတကွ နေထိုင်နိုင်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။ မျောက်များကို လမ်းဘေးရှိ တောင်စောင်းများတွင် တစ်ခါတစ်ရံ တွေ့ကြရသည်။ အမဲလိုက်ခြင်း၊ တောကောင် များကိုပစ်ခတ်ခြင်းများကို တားမြစ်ထားသဖြင့် သဘာဝတောကောင်များသည် ပုပ္ပားဒေသတွင် ဘေးကင်းစွာ ရှင်သန်နေကြကာ ကောင်းမွန်သောဂေဟစနစ်ကို မြင်တွေ့ကြရပေသည်။
ပုပ္ပားသည် သဘာဝရေမြေကောင်းမွန်သော နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေထွက် ၉၉ ခုမှထွက်ရှိ သောရေများကို သုံးစွဲသောက်သုံးကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ပုပ္ပားတောင် ဥယျာဉ်၏ အရှေ့ဘက်အဖျားတွင်ရှိသည့် နတ်ကန်လည်ရွာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာ လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ကျောက်တံခါး၊ ဆုံကုန်း၊ ဆင်ဆင်းစသည့်ရွာများတွင် သဘာဝ အော်ဂဲနစ်သင်္ဘော၊ ငှက်ပျော၊ သရက်၊ သီဟိုဠ်သရက်နှင့် နဂါးမောက်စိုက်ခင်းများကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ နတ်ကန်လည်ရွာမှထွက်ရှိသော စိန်တစ်လုံးသရက်သီးများကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ မူဆယ်မြို့မှတစ်ဆင့်တင်ပို့လျက်ရှိရာ တစ်ခြင်းလျှင် ၁၅ ကီလိုဂရမ် အလေးချိန်ရှိသည့် သရက်သီးခြင်းများကို အများအပြား တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အလေး ချိန် ၁၅ ကီလိုဂရမ်ပြည့်ရန် ပလတ်စတစ်ခြင်းတစ်ခြင်းတွင် အလုံးရေ ၃၅ လုံးမှ အလုံး ၄ဝ ကြား ထည့်ရပြီး သရက်သီးများသည် အော်ဂဲနစ် စိန်တစ်လုံးသရက်သီး များဖြစ်ကြသည်။ သဘာဝမြေသြဇာကိုသာ အသုံးပြုလျက် အားဖြည့်ဆေး၊ ပိုးသတ် ဆေး၊ ဓာတုဗေဒဆေးများ မသုံးစွဲဘဲစိုက်ပျိုးထားသဖြင့် သရက်သီးများသည် အလွန် အရသာရှိသကဲ့သို့ ဘေးဥပဒ်လည်း ကင်းရှင်းလှပေသည်။ ပုပ္ပားဒေသရှိ အော်ဂဲနစ်စိုက်ခင်းများသို့ ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်မှုရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ပုပ္ပားသည် ကောင်းမွန် သောဂေဟစနစ်နှင့်အတူ လှပသောရှုမျှော်ခင်းများရှိသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားများ ၁၂ ရာသီ လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားများအတွက် အပန်းဖြေခရီးသာမက တောင်တက်ခရီးစဉ် အပါအဝင် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ခရီးသွားအစီအမံများကို တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ပုပ္ပားခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ယခုထက် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာကာ ဒေသခံများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝများသည်လည်း တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပေသည်။ ။
Reference : မောင်သာ(ရှေးဟောင်းသုတေသန)
၇. ၆. ၂၀၁၆ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှ…